Забур 116 CARS - Nnwom 116 ASCB
2Потому что велика милость Вечного к нам
1Medɔ Awurade ɛfiri sɛ, ɔtee me nne.
Ɔtee me mmɔborɔhunu su.
2Esiane sɛ ɔbrɛɛ nʼaso maa me enti,
mɛfrɛ no wɔ ɛberɛ a mete ase yi.
3Owuo nhoma kyekyeree me,
ɛda ho ahometeɛ baa me so,
ɔhaw ne awerɛhoɔ hyɛɛ me so.
4Afei mebɔɔ Awurade din kaa sɛ,
“Ao Awurade, gye me nkwa!”
5Awurade yɛ ɔdomfoɔ ne ɔteneneeni;
ayamhyehyeɛ ahyɛ yɛn Onyankopɔn ma.
6Awurade bɔ ɔwɛmfoɔ ho ban;
ɛberɛ a mewɔ ahohiahia mu no, ɔgyee me.
7Nya abotɔyam bio, Ao me kra,
ɛfiri sɛ Awurade ne wo adi no yie.
8Na wo, Ao Awurade, woagye me kra afiri owuo mu;
woamma mʼani amporo nisuo,
na woamma me nan ansunti,
9sɛ mɛnante Awurade anim
wɔ ateasefoɔ asase so.
10Megye diiɛ; ɛno enti mekaa sɛ,
“Mewɔ ahohia kɛseɛ mu.”
11Na mʼabasamtuo mu, mekaa sɛ,
“Nnipa nyinaa yɛ atorofoɔ.”
12Ɛdeɛn na mɛtumi de atua Awurade ka
wɔ ne papa a wayɛ ama me nyinaa?
13Mɛma nkwagyeɛ kuruwa no so
na mabɔ Awurade din.
14Mɛdi ɛbɔ a mahyɛ Awurade no nyinaa so
wɔ ne nkurɔfoɔ nyinaa anim.
yɛ aboɔden wɔ Awurade ani so.
16Ao Awurade, ampa ara meyɛ wo ɔsomfoɔ;
meyɛ wo ɔsomfoɔ, wʼafenaa babarima;
wayi me afiri me mpɔkyerɛ mu.
17Mɛbɔ aseda afɔdeɛ ama wo
18Mɛdi me bɔ a mahyɛ Awurade no so
wɔ ne nkurɔfoɔ nyinaa anim,
19wɔ adihɔ a ɛwɔ Awurade fie
wɔ wo mfimfini, Ao Yerusalem.
ASCB : Nnwom 116